Ukanti omnye umphathi wethu usungula inethiwekhi ye5g kwilizwe liphela
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ukanti omnye umphathi wase-US usungula inethiwekhi ye5G yelizwe liphela
Abaphethe iintambo ezingenazingcingo e-US kunqabile ukuba bafumane ingqwalaselo efanayo neVerizon, AT & T, kunye ne-T-Mobile, kodwa ngokophando lwamva nje, abanye baba badlali abancinci kumzi mveliso weselula banokugcina abathengi babo benelisekile njengezinja eziphezulu yenza.
Iqakamba, eyayingoyena mntu uphethe i-non-contract-full service 'carrier kwi Ingxelo yamava yokuthenga ngaphandle kwamacingo i-JD Power , yaqokelela amanqaku amathathu kuphela ngaphantsi kwe-T-Mobile, eyayilawula itshathi ehlawulwa emva kwexesha, ngelixa yayigqitha ubude bee-AT & T kunye neVerizon.
Ngelishwa, iCricket engenazingcingo yeyakwa-AT & T, eyavumela umqhubi ohlawulelwa kwangaphambili ukuba enze izibhengezo ezibini ezinomdla kanye phambi kwempelaveki eqale. Okokuqala kwaye ngaphambi kwento yonke, Abathengi beqakamba ngoku banokonwabela ukufikelela kwinethiwekhi ye-5G 'kwilizwe lonke' , nangona iphantse ihambe ngaphandle kokutsho ukuba izilumkiso eziqhelekileyo kunye nemiqolomba iyasebenza.
Ukugubungela i-5G, izicwangciso kunye neefowuni
Ngokucacileyo, iCricket & apos; s Ukugubungela i5G ayifani ukufumaneka kwenkonzo 'yesantya esiphezulu' yabathengi be-AT & T. , ethi ityhale inkcazo yento egqalwa njengeminikelo yelizwe ngu egubungela abantu abangama-205 ezigidi kwiimarike ezingama-395 .
Ukuphuculwa kwesantya akubalulekanga kangako okwangoku, njengoko uninzi lwezo marike lunokufumana kuphela umqondiso webhendi ephantsi ye-5G. Oku kuhamba kude kakhulu kunaphakathi kwebhendi okanye iteknoloji ye-mmWave, ukungena kuzo zonke iintlobo zemiqobo, kodwa iinombolo zayo zokukhuphela ihlala ithelekiswa naleyo iphumeleleyo kunxibelelwano lwe-4G LTE .
Koko ixabisekileyo, i-Cricket ibonelela ngenkonzo ye-5G kunye ne-5G, eyokugqibela ixhomekeke kubuchwephesha be-mmWave yetekhnoloji esetyenziselwa iVerizon & apos; ukutshisa ngokukhawuleza kwenethiwekhi ye-Ultra Wideband, icala elicacileyo libala okanye ukungabikho ngqo ngaphandle kweendawo ezithile zedolophu.
Ukuba awukhathazeki kakhulu zezi ngxaki kwaye usafuna ukuba ngumamkeli weqakamba we5G, kuya kufuneka uphehle imali kwi-1,200 ye-Samsung Galaxy S20 + 5G kwaye usebenze le nkwenkwe imbi kwisicwangciso seDatha esiLula senyanga esixabisa i $ 35 kunye phezulu. Ukuthetha ngayo, i-Simply Data lineup iyandiswa ngexabiso elitsha lama-90 eedola ngenyanga kubandakanya i-100 gigs yedatha ekhawulezayo, xa kuthelekiswa ne- $ 35 kunye ne- $ 50 yezicwangciso eziza kuphela nge-20 kunye ne-40GB yedatha ekhawulezileyo ngokulandelelana.
Xa sisithi wena & apos; llunayoukuthenga i-Galaxy S20 +, khawukhathalele, sithetha ukuba ngokwenyani yelizwi, njengoko indawo yamandla ye-6.7-intshi yeyeli xesha ikukuphela kwe-smartphone ye-5G enamandla avela kwiCricket. Kwicala eliqaqambileyo, unokukhetha into ebizwa njalo ukuqeshisa okuqhubela phambili nokwahlulahlula i-1,200 yeendleko ezichazwe apha ngasentla ngeveki, ngeeveki ezimbini, okanye ngezavenge zenyanga, nangona kungoku kungekho saphulelo ekufuneka sibenayo nantoni na, nokuba kungokuthengisa okanye ukungena kweenombolo.
Intengiso entsha epholileyo kunye nezinye iindlela zokuhlawula ezikhoyo
Esinye isibhengezo esikhulu kukuba bonke ababhalisile ngaphandle kweCricket banokufumana isilingo seentsuku ezingama-30 zasimahla kwiHBO Max , iqonga elitsha lokusasaza ividiyo ngaphandle kwenye ngaphandle kwe-AT & T. Ukufaka ibango lakho lokuncoma iNetflix, kufuneka Ndwendwela eli khonkco kwaye ubhalise.
Gcina ukhumbula ukuba uya kuhlawuliswa i-14.99 yeedola ngenyanga ekupheleni kwexesha lokunyusa, ke musa ukulibala ukurhoxisa umrhumo wakho ngexesha elifanelekileyo ukuba awufuni ukuba oko kwenzeke.
Kwezinye iindaba ezingabalulekanga kangako, iCricket yongeza iApple Pay, uGoogle Pay,kwayeAbakwaSamsung bahlawule kuzo zonke iindawo ezinophawu lwenkampani kunye neeapps zenkonzo, babe sisizwe sokuqala somnikezeli ngaphandle kwamacingo wesivumelwano sokuxhasa zonke iindlela ezintathu zokuhlawula 'ezizezinye' ezisetyenziswayo.
Isamsung galaxy s9 ukukhutshwa okusebenzayo
Guqula Java into ibe yiJson
I-verizon engenazingcingo ayinakho ukwenza umnxeba
Ukubetha ukungxamiseka koLwesihlanu oMnyama okwangoku ngezi zimbini zokubulala zeGalaxy Note 8 eBay
Isamsung ikhupha usetyenziso lwam lweKNOX ngokufikelela ngokulula kwiiapps zeshishini
Ukuthengiswa okutsha okushushu kuzisa i-iPhone 8 Plus kunye ne-7 Plus ukuya kumaxabiso asezantsi okuphambeneyo (ahlaziyiweyo)
Iimodeli ezithile ze-Apple iPhone 6 kunye ne-iPhone 6s Plus zikulungele ukulungiswa simahla